Ibesi Dɛn Ehu Nokwar Som? | Asɛmpa
1. Aso nokwar som yɛ kortsee?
“Hom nhwɛ yie wɔ nkɔnhyɛfo atorfo ho.”​—MATTHEW 7:15.
Ɔsom kortsee a ɔyɛ nokwar som na Jesus kyerɛɛ n’esuafo no. Ɔtse dɛ ɔkwan bi a ɔkɔ onnyiewiei nkwa mu. Jesus kãa dɛ, nyimpa “kumaabi na wohu” dɛm kwan no. (Matthew 7:14) Ɔsom a ogyina n’Asɛm Bible no do nkotsee na Nyankopɔn gye to mu. Nokwar asomfo gyedzi yɛ kor na iyi kã hɔn bɔ mu.​—Kenkan John 4:23, 24; 14:6; Ephesusfo 4:4, 5.
Hwɛ video a wɔato dzin Ana Ɔsom Nyina Na Nyankopɔn Gye To Mu?
2. Ebɛn asɛm na Jesus kãa faa ator Christiansom ho?
“Wɔkã dɛ wonyim Nyankopɔn, naaso wɔdze hɔn ndwuma san no.”​—TITUS 1:16.
Jesus dze kɔkɔbɔ maa dɛ nkɔnhyɛfo atorfo bɛsɛɛ Christiansom. Wɔ nyimpa enyi do no, ɔtse dɛ mbrɛ wɔyɛ nokwar asomfo. Hɔn asɔrasɔr no kyerɛkyerɛ dɛ wɔyɛ Christianfo. Naaso hɔn ndzeyɛɛ botum ama eehu dɛ wɔnnyɛ nokwar Christianfo. Wɔ ebɛn kwan do? Nokwar som nkotsee na ɔma yenya nokwar Christianfo a wɔda abrabɔ pa na ndzeyɛtsenenee edzi a nkorɔfo tum hu.​—Kenkan Matthew 7:13-23.
3. Ibesi dɛn ehu nokwar asomfo?
Susu nsɛmpɔw enum yi a ɔma yehu hɔn no ho:
Nokwar asomfo bu Bible no dɛ ɔyɛ Nyankopɔn n’Asɛm. Wɔbɔ mbɔdzen dze Bible no mu ngyinadonsɛm bɔ hɔn bra. Ntsi nokwar som yɛ soronko fi ɔsom a ogyina nyimpa no nsusui do no ho. (Matthew 15:7-9) Nokwar asomfo dze dza wɔkyerɛkyerɛ nkorɔfo no bɔ hɔn bra.​—Kenkan John 17:17; 2 Timothy 3:16, 17.
Jesus no nokwar ekyirdzifo hyɛ Nyankopɔn ne dzin, Jehovah no, enyimnyam. Jesus hyɛɛ Nyankopɔn ne dzin no enyimnyam dze nam da a ɔdaa no edzi kyerɛɛ nkorɔfo no do. Ɔboaa nkorɔfo ma wohun Nyankopɔn na ɔkyerɛɛ hɔn dɛ wɔmbɔ mpaa dɛ, Nyankopɔn ne dzin ho ntsew. (Matthew 6:9) Ebɛn ɔsom na wɔda Nyankopɔn ne dzin edzi kyerɛ nkorɔfo wɔ bea a etse no?​—Kenkan John 17:26; Romefo 10:13, 14.
Nokwar Christianfo kã Nyankopɔn n’Ahenman ho asɛm kyerɛ nkorɔfo. Nyankopɔn somaa Jesus dɛ ɔmbɛkã Ahenman no ho asɛmpa no. Nyankopɔn n’Ahenman no yɛ adasamba hɔn enyidado kortsee. Jesus kɔr do kãa Ahenman no ho asɛmpa dze kesii no wu mu. (Luke 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ɔkãa dɛ n’ekyirdzifo bɛkã Ahenman no ho asɛmpa no. Sɛ obi ba wo nkyɛn bɛkã Nyankopɔn n’Ahenman no ho asɛm kyerɛ wo a, ehwɛ a ofi ebɛn ɔsom mu?​—Kenkan Matthew 24:14.
Jesus n’ekyirdzifo mmfi wiadze bɔn yi mu. Ibotum ehu hɔn osiandɛ wɔmmfa hɔn ho nnhyehyɛ amanyɛsɛm na basabasayɛ a ɔkɔ do wɔ hɔn man mu no mu. (John 17:16; 18:36) Bio so, wonnsũasua wiadze no suban bɔn no nye ne ndzeyɛbɔn no.​—Kenkan James 4:4.
Nokwar Christianfo da ɔdɔ soronko edzi kyerɛ hɔn ho. Nyankopɔn n’Asɛm a wosũa ntsi, wɔwɔ obu ma nyimpa a wofi mbusuakuw ahorow nyina mu. Kaansa mpɛn pii no ator som ahorow dze hɔn ho ahyehyɛ amanamamfo hɔn akodzi mu mpo a, nokwar asomfo nnyɛ dɛm koraa. (Micah 4:1-3) Mbom no, nokwar Christianfo fi hɔn akoma nyinara mu dze hɔn mber na hɔn ahodze boa nkorɔfo na wɔhyɛ hɔn nkuran.​—Kenkan John 13:34, 35; 1 John 4:20.
4. Aso ibotum ehu ɔsom a ɔyɛ nokwar no?
Ebɛn ɔsom na wɔdze hɔn nkyerɛkyerɛ nyina gyina Nyankopɔn n’Asɛm do, wɔhyɛ Nyankopɔn ne dzin enyimnyam, na wɔkã kyerɛ nkorɔfo dɛ Nyankopɔn n’Ahendzi no nye adasamba hɔn enyidado kortsee? Ebɛn ɔsom na no mufo da ɔdɔ edzi kyerɛ hɔn ho na wɔmmfa hɔn ho nnhyehyɛ akodzi mu? Isusu dɛ ɔyɛ ebɛn ɔsom?​—Kenkan 1 John 3:10-12.
Fa mona Fa mona Ibesi Dɛn Ehu Nokwar Som?